Countdown (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
၂၀၁၉ အောကျတိုဘာ လထဲရုံတငျသှားတဲ့ Horror ရုပျရှငျကားကောငျးတဈခုနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ….Mobile ခတျေ ဖွဈလာတာနဲ့ အမြှလူတိုငျးဟာ အရာရာတိုငျးကို ဖုနျးပျေါမှာပဲအလုပျပွီးစီးစပေါတယျနတေို့ငျး ဖုနျးပျေါမှာပဲ ဘာတှေ အသဈအဆနျးထှကျလဲဘာတှေ ထူးဆနျးလဲ လိုကျလုပျနကွေပါတယျ…တဈညမှာတော့ လူငယျတဈစု ဟာ ပါတီတဈခုမှာသောကျစား နကွေရငျး App တဈခုကို မထငျမှတျပဲရှာဖှေ တှရှေိ့သှားပါတယျ App နာမညျက ” Countdown” ပါထူးထူးဆနျးဆနျးပါပဲ ဒီ App ထဲ ဝငျလိုကျရငျ သငျ့ရဲ့ သနေကေို့တှကျခကျြပေးမယျလို့ ဆိုပါတယျ…ခတျေလူငယျတှေ ပွီပွီ အလောငျးအစား လုပျဖို့App တှကေို ပွိုငျတူ ဒေါငျးလုပျ ယူကွပွီး ဘယျသူအရငျသမေလဲ ပွိုငျကွပါတော့တယျ…အားလုံးဟာ အသကျ ၈၀ ကြျော ၉၀ ထိနကွေရပွီး အဲ့ဒီထဲကမှ ထူးထူးဆနျးဆနျးကောငျမလေး တဈယောကျကတော့၃ နာရီ အတှငျး သမေယျလို့ App ကသတိပေးလာပါတယျ…အားလုံး အတျောလေး ရယျလိုကျရပါတယျအဓိပါယျ မရှိတဲ့ App ကိုလဲ မလြေှ့ော့သှားကွပါတယျတဈယောကျထဲ တုနျလှုပျနတောကတော့3 နာရီပဲ နရေမယျလို့ ဘာမှနျးမသိတဲ့ APP ကခြိနျးခွောကျခံထားရတဲ့ ကောငျမလေးပါပဲ…တကယျတမျး ၃ နာရီ အတှငျးသမေလားရှငျမလား ဆိုတာကိုတော့ . . .
၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ လထဲရုံတင်သွားတဲ့ Horror ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်….Mobile ခေတ် ဖြစ်လာတာနဲ့ အမျှလူတိုင်းဟာ အရာရာတိုင်းကို ဖုန်းပေါ်မှာပဲအလုပ်ပြီးစီးစေပါတယ်နေ့တိုင်း ဖုန်းပေါ်မှာပဲ ဘာတွေ အသစ်အဆန်းထွက်လဲဘာတွေ ထူးဆန်းလဲ လိုက်လုပ်နေကြပါတယ်…တစ်ညမှာတော့ လူငယ်တစ်စု ဟာ ပါတီတစ်ခုမှာသောက်စား နေကြရင်း App တစ်ခုကို မထင်မှတ်ပဲရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားပါတယ် App နာမည်က ” Countdown” ပါထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ ဒီ App ထဲ ဝင်လိုက်ရင် သင့်ရဲ့ သေနေ့ကိုတွက်ချက်ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်…ခေတ်လူငယ်တွေ ပြီပြီ အလောင်းအစား လုပ်ဖို့App တွေကို ပြိုင်တူ ဒေါင်းလုပ် ယူကြပြီး ဘယ်သူအရင်သေမလဲ ပြိုင်ကြပါတော့တယ်…အားလုံးဟာ အသက် ၈၀ ကျော် ၉၀ ထိနေကြရပြီး အဲ့ဒီထဲကမှ ထူးထူးဆန်းဆန်းကောင်မလေး တစ်ယောက်ကတော့၃ နာရီ အတွင်း သေမယ်လို့ App ကသတိပေးလာပါတယ်…အားလုံး အတော်လေး ရယ်လိုက်ရပါတယ်အဓိပါယ် မရှိတဲ့ App ကိုလဲ မေ့လျှော့သွားကြပါတယ်တစ်ယောက်ထဲ တုန်လှုပ်နေတာကတော့3 နာရီပဲ နေရမယ်လို့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ APP ကချိန်းခြောက်ခံထားရတဲ့ ကောင်မလေးပါပဲ…တကယ်တမ်း ၃ နာရီ အတွင်းသေမလားရှင်မလား ဆိုတာကိုတော့ . . .
Option 1 storage.msubmovie.com 425 MB SD (480p)
Option2megaup.net 425 MB SD (480p)
Option3uptomega.com 425 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 425 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 425 MB SD (480p)
Option6datbu.com 425 MB SD (480p)
Option 12 datbu.com 1 GB HD
Option 13 storage.msubmovie.com 2.5 GB FHD DTS 5.1
Option 14 sharer.pw 2.5 GB FHD DTS 5.1
Option 15 yuudrive.me 2.5 GB FHD DTS 5.1
Option 16 datbu.com 2.5 GB FHD DTS 5.1